स्थानीय सरकारको राहत योजना वा अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने गलत कदम ! – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
स्थानीय सरकारको राहत योजना वा अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने गलत कदम !
२७ भाद्र, २०७७ १६:४० मा प्रकाशित
यो लेख एकदम संवेदनशील छ र म आशा गर्छु कि पढ्दा पाठकहरूले केही धैर्यता अपनाउनु हुन्छ।
म नयाँ योजनाको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन स्थानीय सरकारले स्थानीयलाई कोरोनाको राहतको रूपमा ल्याएकाे छ।
श्रमकाे प्रमाणिकरण गराएर चामलको भुक्तानी गर्ने। जुन हेर्दा राम्रो देखिन्छ र यसले केही समस्याहरू समाधान पनि गर्दछ तर यसले अर्थशास्त्रको अन्य भागमा ठूलो प्रभाव पार्छ । तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यो महामारीको अवधि हो र तपाईं अर्थशास्त्रको बारेमा किन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। याे जरूरी भएकैले लेखेकाे हुँ।
यदि तपाईं यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यी चीजहरूकाे गहिरो प्रभाव देख्नुभएन वा थाहा छैन।सुरु गर्नु अघि म तपाईलाई केहि याद गराउन चाहन्छु आधुनिक अर्थशास्त्र पूरै पैसा र सामानको मौद्रिक मूल्यमा आधारित छ।
हामी अब कसरी पहिले काम गर्थ्यौं वा आधारभूत अर्थशास्त्र जुन हामीसँग पहिले थियो हेरौं है त। हामी केहि समयको लागि काम गर्छौं र काम पछि हामी पैसा प्राप्त गर्थ्यौं।तर अहिले सरकारले चामल बाँढिरहेको छ । जसले काेहिबेरकाे समस्या समाधान त गर्छ तर त्याे भन्दा धेरै असर गर्छ ।
पैसा प्राप्त गरेपछि तपाईं विभिन्न खण्डहरूमा पैसा छुट्याउनुहुनेछ र त्यस अनुसार खर्च गर्नुहुनेछ जस्तै खाना, ग्यास,लुगा कपडा,नुन तेल आदी। यसले उपभोक्तालाई कम खर्चमा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न मद्दत गर्थ्यो।अब कामदारले पाएको पैसाकाे रेकर्ड गरौं। उ किराना पसल, तरकारी बजार र अन्य ठाउँहरूमा जान्छ र किन्छ। यसको मतलब तरकारी विक्रेताले बाँच्नको लागि पैसा पाउँछ र किराना पसलले पनि बाँच्नको लागि पैसा पाउँछ। जब एक कामदारले पैसा पाउँछ याे कुरा हरेक पटक हुन्छ । यसको मतलब उद्योगहरु बाँच्न र मानिसहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न सक्छन् किनकी बजारमा माग हरेक कुराकाे हुन्छ र माग पुर्ति गर्नु नै ब्यापार हाे।आशा छ तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ।जब काम गर्नेलाई चामल भुक्तानी गरिन्छ भने यसको प्रभाव कहिँ पर्दैन र अरू चिजकाे खपत हुन्न र अन्य कलकारखाना डुब्छन् अनि फेरि बेराेजगारी सुरू हुन्छ।
तपाईं भन्नुहाेला यदि व्यक्ति भोकाएको छ र खाने चामल छ भने यो राम्रो होईन र ? राम्रो हाे तर कामदारले केहि पैसा बचत गर्छ र त्यसलाई अन्य भागमा प्रयोग गर्न सक्छ। यदि चामल बाँडियाे भने उदाहरणका लागि यदि ऊ सँग ग्यास किन्न पैसा छैन भने उसले भात खान पाउँदैन र उ भाेकै नै हुन्छ काम गरेर पनि केहि फाइदा हुन्न । बजारमा चामल विभिन्न प्रकारका हुन्छन् त्यहि मूल्यमा बढी चामल किन्न पनि सकिन्छ । पैसाले सामान उपभोग गर्न लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
यदि खरिदकर्ताले उही मूल्यमा त्यहि चामल किन्न जाँदै थियाे भने? तपाईका अर्को प्रश्न हुन सक्छ। यसमा पनि केहि समस्याहरू छन्।
यो अवधारणा हो पैसाको वितरण र बजारमा सामान खरीदको। चामललाई वितरण गर्ने व्यक्ति अथवा भनाैँ स्थानिय सरकार जसले अत्यन्तै धेरै रकमकाे एकै ठाउँबाट चामल खरीद गर्छ। यसले एकै व्यक्ति वा भनाैँ स्थानिय सरकार जसकाे खरिद शक्ति उच्च हुनेछ जुन राम्रो हाेइन किनकि अर्थतन्त्र सबै व्यक्तिहरूकाे खरिद शक्ति मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा एक व्यक्तिले केहि असर पार्दैन हरेक व्यक्तिकाे उत्तिकै हात हुन्छ। एकै ठाउँबाट चामल किन्याेभने उदाहरणका लागि १०,००,००,००० थोक व्यापारीकाे ठूलो व्यापार हुन्छ र उसले मात्र नाफा लिन्छ र त्यहि व्यापारीलाइ मात्र फाइदा हुन्छ तर यदि यो कामदारलाई दिइन्छ भने उसले आफ्नो नजिककाे पसलबाट किन्ने छ। जसले पसललाई आफ्नो घर चलाउन केहि सहयाेग दिनेछ। यसले पसललाई बजारमा रहन दिनेछ र ऊ पनि बाँच्नेछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसैले लेनदेन कुनै पनि कुरा पैसामा गरिनु पर्छ। नत्र सरकारले जानी नजानि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नेछ। हामी राम्रो गर्न खाेज्दा खोज्दै नराम्रो असर भाेग्न बाध्य हुन्छाै।
याे उदाहरण सानाे थियाे तर याे नेपालभरि भयाे भने निकै ठूलाे असर पार्छ। धनि र गरिबमा आर्थिक दुरी बढ्छ।